Ivenkile yeeVenkile zokuThenga zeDooney kunye neBourke - Umyili Izikhwama
Ivenkile yeeVenkile zokuThenga zeDooney kunye neBourke
Abakhobokisi besikhwama banokuninzi abanokujonga phambili kwiivenkile zeDooney kunye neBourke. Iibhegi ezineesaphulelo kunye nezinto zoncedo zivuthiwe ukuba zithathwe, uninzi luluqokelelo lwamva nje nayo yonke into ikwimeko entsha. Umahluko ukwamaxabiso abalulekileyo.
Ukufumana iDooney kunye neBourke Outlet Stores
Ndwendwela iwebhusayithi yeDooney kunye neBourke ukuze ufumane uluhlu lwee Ivenkile (kunye neevenkile zentengiso) kwilizwe liphela. Okwangoku kukho iivenkile ezili-19 eziphuma kwiindawo ezili-11, kodwa kuya kufuneka ujonge rhoqo ukuvuleka kwevenkile. Logama nje ibhegi yakho oyikhethileyo ifumaneka kwindawo ephumayo, unoku-odola ngefowuni. Iindawo ezimbini ezithandwa kakhulu ekuphumezeni amanqaku amahle (kunye nesaphulelo) ibhegi yeDooney kunye neBourke Iindawo zokuthengisa ze-Orlando Premium kwaye i Iindawo zeTanger .
Igalari yeZitayile zeBhasi yamaQabane esezantsi
Imifanekiso yeKnockoff Designer Purses
Iingcamango zeTote Bag ezenziwe ekhaya
Yimalini onokulindela ukuyigcina
Kukho iindlela ezimbalwa onokuthi ugcine ngazo imali engxoweni enkulu kwezi ndawo zikhethiweyo zorhwebo.
Iivenkile eziphuma ngaphandle zidume ngento enye: amaxabiso amahle. Uyakufumanisa oko kwiindawo zokuthengisa zeDooney kunye neBourke, ezibonisa yonke into ukusuka kukhetho olukhethiweyo lweengxowa zeediliya kukhetho lwamva nje lweebhegi zeDooney kunye neBourke. Izinto ezithengiswayo zihlala ziphakathi Iipesenti ezingama-20 ukuya kuma-40 zesaphulelo Ixabiso loqobo, kodwa ezinye izinto zinesaphulelo ngokunzulu ngakumbi.
Xa uthenga ibhegi yakho yeDooney kunye neBourke kwivenkile ephumayo, ungasebenzisa ithuba lokuthengisa unyaka nonyaka kunye nokuthengisa ngonyaka okunikezela ngezaphulelo ezongezelelweyo kwimpahla esele iphawulwe. Amaxesha okuthengisa ngqo axhomekeke kwimveliso oyindwendwelayo, ke fowunela phambili.
Ukuba wenzeka ukuba ube nendawo oyithengisayo kufutshane nawe, qiniseka ukuba ubhatala ivenkile ngokukhethekileyo ngexesha leholide- oko kukuthi ngeLwesihlanu omnyama okanye ngeveki kaMongameli, xa ukuthengisa kuphezulu kakhulu kwaye ukhethe iivenkile ezinikezela ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-60 eziqokelelweyo ezithile . Fika kwangoko ukuze ufumane izandla zakho kwesona sitokhwe sihle.
Ekuphela kwento ebhetele kuneebhegi zomyili ezinesaphulelo kuxa beza nezikhuphoni ezongezelelweyo. Iivenkile ezininzi zeDooney kunye neBourke zibonelela ngamakhuphoni ukwenza ukuba ukuthenga kwakho kube sengqiqweni ngakumbi. Ukuba kwenzeka ukuba utyelele i-Tanger Outlet ekhankanywe ngasentla okanye i-Orlando Premium Outlet umzekelo, unomvuzo ngeepesenti ezingama-20 ezongezelelweyo kwixabiso eliqhelekileyo lokuthengisa kwibhegi yakho evela kwingqokelela ethile.
Uninzi lwevenkile zeDooney kunye neBourke zifumaneka kwiindawo ezinkulu. Yima kwiofisi enkulu yeevenkile kwaye ubone ukuba banazo na iincwadi zekhuphoni zalo mhla.
Xa ufika evenkileni, cela umntu othengisayo ukuba enze nasiphi na isigqebhezana esisebenzayo, emva koko ujonge ukuze ubone ukuba zeziphi na ezi zikhuphoni. (Ayizizo zonke iikhuphoni ezigubungela zonke izitayile kunye nemigca.)
Qaphela ukuba amatikiti awahlali evumelekile kuzo zonke iindawo zokuphuma, ke kufuneka uqiniseke ukuba ufunda ukuprinta okuhle ngononophelo ukuthintela nakuphi na ukuphoxeka.
Ukufumana amakhuphoni ongezelelweyo kunye nezilumkiso kwizivumelwano ezizodwa, bhalisela uluhlu lwe-imeyile lukaDooney kunye neBourke.
Yintoni onokuyilindela kwindawo yokuphuma
IDooney kunye neBourke luphawu oludumileyo, kwaye izimbo zabo ziyatshintsha rhoqo: sukucinga ngoyilo oludlulileyo, kodwa njengohlobo olunomda! Ukuthenga ngaphandle kunokuba nomvuzo, kodwa kukho izinto ezithile oza kufuna ukuzijonga xa uthenga:
I-Dooney kunye neBourke bathengisa ivenkile yabo yokuthengisa kwiivenkile zokuphuma, kubandakanya ukuphuma, ukuvalwa koyilo, kunye nezimbo ezinesaphulelo. Abanawo umgca wevenkile eyahlukileyo yefektri, ngenxa yoko ufumana awona mgangatho uphezulu wedola yakho.
Izaphulelo kwiivenkile zeefektri ziyahluka ngokubanzi, zihlala ziphakathi Iipesenti ezingama-20 nama-60. Ukuhla kwamanqaku rhoqo, utshintsho lwamaxesha onyaka, kunye nokuthengisa okhethekileyo kunokubangela izaphulelo ezinzulu ngakumbi.
IDooney kunye neBourke iwukhathalele kakhulu umfanekiso wayo kwaye inelungelo lokunciphisa inani lezinto ezithengwa kwivenkile yefektri ukukhusela kwiimveliso zazo ezithengiswayo kwiimarike zentakumba, kwi-Intanethi, njl. Njl. Ukuba uceba ukuthenga iingxowa zezipho, jonga umda wokuthenga ngoko ke akuyi kudana. Oku kungahluka ngevenkile; Imida yokuthenga inokubekwa kwinani lezinto ezithengiweyo yonke imihla, ngenyanga, okanye ngonyaka.
Gcina irisithi; Iindawo ezikhutshelweyo ziya kukuvumela ukuba ubuyisele ukuthengiswa kwakho okungasetyenziswanga ukuze utshintshise okanye ugcine ikhredithi kwiintsuku ezingama-30 Izinto zokucoca, nangona kunjalo, zithathwa njengezithengisayo zokugqibela kwaye azinakubuyiselwa.
Abantu abaninzi bavakalisa inkxalabo malunga nokuthengwa kweebhegi kwiivenkile ezithengisayo. Bayazibuza ukuba ingaba iingxowa abazokuchitha kuzo imali abayisebenzele nzima zonakaliswe nangayiphi na indlela, ngaba ziifektri ezilahliweyo, izinto ezibuyisiweyo, okanye ngandlela thile azifezekanga. E-Dooney naseBourke, abathengi banokuqiniseka ukuba izinto azizizo iimveliso ezisetyenziswayo okanye izinto ezibuyisiweyo zalo naluphi na uhlobo.
Ukuba, nangona kunjalo, into ekubhekiswa kuyo inesiphene esincinci, iya kuphawulwa njengesitenxo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba nabona bathengi bazimiseleyo abayi kuhlala bekwazi ukubona isitenxo. Rhoqo, yinto encinci kakhulu kwaye ayibonakali ngamehlo. Ngamanye amagama, ziinkcukacha ezincinci zezithambiso ezingayi kuthi nangayiphi na indlela zichaphazele ubuhle bengxowa okanye amandla ayo okuthwala izinto zakho zemihla ngemihla ngesitayile.
Ukufumana amanqaku kwiDooney kwi-Intanethi
Usenokuba uqaphele ukuba zimbalwa iivenkile ezikhoyo kwiindawo ezinkulu zentengiso kwilizwe liphela. Ukuba awubanga nethamsanqa ngokwaneleyo ukuba uphile, ungasasebenzisa ithuba elithile.
Fumana izivumelwano kwiLoveDooney.com
Dooney.com : Ukuma kwakho kokuqala yiWebhu yeWebhu kunye neBourke, enamacandelo amabini azinikele kwizinto ezinamaxabiso asezantsi. Cofa ku 'Ngaphantsi kwe- $ 100' ukuze ukhethe iimveliso ezingayi kwaphula ibhanki. Iimveliso ezikhoyo zibandakanya izihlangu, ubucwebe, iimeko zokuthambisa, iiwotshi, amakhubalo, iifobs eziphambili, iiambrela, izipaji kunye, ewe, neebhegi.
lvvunga.com : Le webhusayithi ithengisa kuphela iimveliso zeDooney kunye neBourke kwiipakethe zokuqala (ezingasetyenziswanga okanye ezingabuyiswanga.) Amaqabane e-Ilovedooney kunye neDooney kunye neBourke, ke uyazi ukuba ukuthengiswa kuyinyani, kwaye izaphulelo zentengiso kule webhusayithi zinokufikelela kuma-60 epesenti.
6pm.com : Le venkile yewebhu isaphulelo ibonelela ngeDooney kunye neBourke kwiintengiso ezikwi-Intanethi kwaye idwelisa ixabiso elithengiswayo lokuthengisa (MSRP). Izaphulelo zinokuba nkulu, kodwa uhlala uthengisa uze ujonge ukujongana nezinye iisayithi ngexabiso elifanelekileyo.
eBay : I-Ebay inokhetho olomeleleyo lweebhegi zeDooney kunye neBourke. Ukufumana into oyifunayo-kwaye uqiniseke ukuba iyinyani- kunokuba yinto enobuqhophololo, kodwa akukho mngeni mncinci kunokufumana iindlela ezingaphezulu ezinje ngesipaji sokwenene sikaLouis Vuitton. Gcina ujonge ukujonga simahla ukuhambisa kunye nokonga kwakho.
Ukugcina kwiiNtengiso nakwiiVenkile zeSebe
Iivenkile ezininzi zithwala iimveliso zeDooney kunye neBourke. Iingxowa zihlala zithengiswa amaxesha ngamaxesha, ngakumbi kanye ngaphambi kweholide enkulu, ke phawula ikhalenda yakho kwaye uthathe ithuba lokuthengisa. Unokongeza kwisaphulelo sakho ngokusayinela ikhadi levenkile (elihlala linkqonkqoza kwipesenti ezili-10 ukuya kwezili-15 kwinto oyithengileyo) okanye usebenzisa isigqebhezana esisebenzayo sevenkile (funda ushicilelo olululo ukuze wazi ukuba kukho naziphi na iimveliso ezingafakwanga kwisaphulelo.)
Ungoyiki ukubuza umphathi wevenkile ukuba banezaphulelo ezingcono kunalezo ziphawulwe phantsi (abo bathengisayo abanakho ukwenza eso sigqibo.) Ezinye zeevenkile eziphezulu zibandakanya: Macy's , Dillard , I-Nordstrom , kunye Belk .
Ukuba ukhetha ukubona iingxowa buqu, ndwendwela iivenkile ezinesaphulelo njenge Marshall kwaye Igama loqhagamshelwano TJ. Maxx . Zombini ziyaziwa ngokuphatha iibhegi zeDooney kunye neBourke ngamaxabiso esaphulelo. Kwakhona, ukhetho aluyi kuba lukhulu njengoko bekuya kuba kwindawo yokuphuma, kodwa ungalindela ukufumana isimbo seendlela. Gcina ukhumbula ukuba ayizizo zonke iindawo eziza kuthwala iingxowa zeDooney kunye neBourke.
Ukuba kukho into ebalulekileyo ekubonakala ukuba uninzi lwabasetyhini alunakubakho ngaphandle kwayo, yingxowa yabo yesandla. IDooney kunye neBourke ngumgca wesikhwama esithandwayo, ubukhulu becala ngenxa yokwakhiwa kweebhegi zazo. Isipaji esikumgangatho ophezulu esivela kulo mgca akufuneki siphule ibhanki, nangona kunjalo. Fumana esona sivumelwano sihle kwi-top-of-the-line bag ngokuthenga iivenkile zabo ze-outlet kwaye uswine isivumelwano ngakumbi nangakumbi ngokuba ujonge ukuthengisa okukhethekileyo kunye namakhuphoni.
Malunga Ukubhala Ukubhala Ikhandlela Magic Ukukhusela Your Credit Umtshato Izimemo Imveliso Yekati
ukuba ujola njani nebhotile yebhola
ziikati ezingamadoda okanye ezibhinqileyo ezingcono
ukuthandana iisayithi 18 ubudala
ungayifumana njani ithoni yolusu kulusu olumnyama
usebenza njani kubantwana abane-autistic
ifonti ejongeka njengesitampu